BEESHA - MAXAMED CUMAR
Maxaa Kajira in la Dhaawacay Islaan Bashiir iyo in Lagu Weeraray Baasuukayaal iyo in Lagu Dawaynayo Isbitaalka Gaalkacyo
Asalaamu Calaykum Waraxmatulaahi Wabara kaatuhu 11/22/2004
Beenin War lagu Qoray Internetka iyo Meela kalaba
Anagoo ah Jaaliyada Maxamed Cumar, waxaan beeninaynaa hadal been abuur iyo isku dir ahaa oo kusoo baxay meel kamida Internet-ka iyo Wargays.
QORAAL KA YAABIYEY ISLAAN BASHIIR
... Aniga idinla hadlaaya miyaa la i dhaawcay, oo yaa i dhaawacay waaba yaabe.. hadalo sidaas u dhigma waxaa yiri Islaan Bashiir oo malay warka been abuurka ah ee ahaa "Gurigii Islaanka xalay fiidkii markay saacadu eer Mahad Islaan Bashiir ayaa ahayd 9.20kiii hamaynimo lagu weeraray qoryahay fudud iyo baasuukayaal. Wareerka ayaa la xaqiijiyey iney geysteen Malayshiyo ay leedahay beesha Maxamed Cumar. Islaan Bashiir ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac fudud waxaana lagu dawaynayaa isbitaalka weyn ee Dhagacade"... Guji
“Warkaas beenta ah oo lagu xusay in Beesha Maxamed Cumar weerar ku qaadeen Islaan Bashiir dhaawaceena, hadana uu isbitaal yaal, iyo in wereerkii lagu qaaday Guriga Madaxwaynaha dhawaan ladoortay C/laahi Yuusuf inay beeshu ka danbaysay”.
Ugu horayntii Waxaan beeninaynaa inaan waxba ka jirin arimahaas aan soo sheegnay oo uu yahay been aan raad lahayn.
Waxaan aad uga xunahay in dad Soomaaliyeed ka shaqeeyaan isku dir laba Jifi oo walaala ah.
Waxaan aad uga xunnahay inay dad Saxaafad sheeganaya madax goostaan qabiil dhan, ulana soo bareeraan danbiga intaas leeg.
Waxaan ka xunahay in si gaara loogu been abuurtay Dr. C/daahir Yuusuf Cilmi oo kamida Odayaasha Beesha iyo siyaasiyiinta Puntland.
Waxaan ugu digaynaa Qarannews.com inuu ku tilaabsado arintaan foosha xun oo kale mar labaad.
Waxaan ugu digaynaa Xogogaal inuu ku tilaabsado arintaan foosha xun oo kale mar labaad.
Waxaan uga digaynaa Soomaalida meelay joogaanba inay wax ka akhristaan labadaas beenlow, ama wakhti ku dhumiyaan.
Waxaan uga digaynaa Saxaafada Soomaalida ee wax garadka ah inay soo xigtaan labadaas waxay qoraan, iyo waliba inaysan ogolaan Sumadooda.
Ugu danbayntii arinta Suldaan Hurre (Alle ha u naxariistee) waxay u taal dadka uu ka dhashay, waana ka go’antahay inay nabad ku xaliyaan, Hadana arintaas waxaa gacta ku haya ilaa heer Isimada Majeerteen iyo Hartiba leh. Wabilaahi Towfiiq.
Dr. Cabdidaahir Yuusuf Cilmi
Afeef: Aragtida qoraaladan waxaa leh qorayaasha ku saxiixan...
Sidee Loo Arkay Heshiiskii Beelaha Hiraab Ku Dhex maray Nairobi